Noo Kaalay!! Angel Di Maria Oo Ka Dalbaday Lionel Messi In Uu Yimaaddo PSG | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaNoo Kaalay!! Angel Di Maria Oo Ka Dalbaday Lionel Messi In Uu Yimaaddo PSG
Noo Kaalay!! Angel Di Maria Oo Ka Dalbaday Lionel Messi In Uu Yimaaddo PSG
Xiddiga reer Argentina ee Angel Di Maria ayaa ka dalbaday kabtanka Barcelona ee Lionel Messi in uu iskaga yimaaddo kooxdaas oo uu yimaaddo waddanka Faransiiska, isla markaana ay iska garab ciyaaraan kooxda PSG.
Di Maria ayaa sheegay in ay ahaan lahayd wax cajiib ah, haddii ay awoodaan in Lionel Messi uu kula soo biiro PSG oo ay helaan fursad ay iskaga garab ciyaaraan.
Labadan ciyaartoy oo xulka qaranka u wada ciyaara, ayaan wali helin fursad ay heer kooxood ugu wada ciyaaraan.
Lionel Messi oo uu xagaaga soo socda ka dhamaanayo heshiiskiisa Barcelona ayay PSG ka mid tahay kooxaha raadinaya ee lala xidhiidhinayo inuu tegi doono, inkasta oo ay hadda u badan tahay in uu sii joogayo Camp Nou.
Isaga oo la hadlayey telefishanka beIN Sports, Di Maria ayaa yidhi: “Xirfaddayda oo dhan, wax kasta oo aan arkay, waxay ila tahay in Leo uu ka yimid duni kale. In aanu isku koox noqonaana cajiib ayay ahaan lahayd.”
Waxa kale oo uu Di Maria sheegay inuu ixtiraamayo Barcelona oo uu Leo wali kula jiro heshiis, waxaanu yidhi: “Laakiin isagu wali waa ciyaartoy Barcelona ka tirsan, heshiisna wuu kula jiraa. Intaa kaddib, waynu arki doonaa (waxa dhaca). In badan ayaan anigu la hadlaa isaga, waxaanan mar walba u sheegaa in waxa ugu muhiimsan uu yahay farxaddiisa iyo qoyskiisa. Way adag tahay in wax kale la yidhaahdo.”
Lionel Messi oo qandaraaskiisu uu ku eg yahay dhamaadka xilli ciyaareedkan ayaa waxa kale oo lala xidhiidhinayaa kooxda Manchester City oo uu uga gacan haadinayo Pep Guardiola oo horena iskugu dayey in uu lasoo saxeexdo xagaagii.
Hadii uu lacibka dunida ka yaban thy ka tagistiisa barcelona ee messi uu agel De maria ey u tahay fursad ee kooxweyn ku tagi karo lkn anigoo ah tageere barcelona ah ma jecli in uu messi koox kale tago